Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. चीनबाट १७५ जना नेपालीलाई स्वदेश ल्याइयो, १० जना चीनमै रोकिए – Emountain TV
काठमाडौं, ४ फागुन । चीनको हुबेई प्रान्तको वुहान र आसपासमा रहेका १७५ जनालाई स्वदेश फर्काइएको छ । कोरोना भाइरस संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेको छिमेकी देश चीनबाट आइतबार बिहान नेपाल वायु सेवा निगमको वाइडबडी विमानमार्फत नेपाल ल्याइएको हो । चीनबाट उद्धार गरिएकामा १७० जना विद्यार्थी, एक जना कामदार र पर्यटक तथा बालबालिका दुई–दुई जना छन् ।
नेपालीको उद्धारका लागि गएको नेपाली ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी विमान करिब नेपाली समय राति करिब ८ बजे वुहानको अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेको थियो । नेपाली समयअनुसार करिब १० बजे उडेको विमान विहान ४ बजे त्रिभुवन विमानस्थलमा अवतरण गरेको हो ।
त्रिभुवन विमानस्थलमा अवतरण पश्चात भक्तपुर खरिपाटीमा बनाइएको क्वारेन्टाइनमा पुर्याइएको छ । उनीहरुलाई एउटा एम्बुलेन्स र पाँच वटा ठूलो बसमा सुरक्षाकर्मीले स्कटिङ गरेर विमानस्थलदेखि खरिपाटीसम्म र्पुयाएको छ । क्वारेन्टाइन लैजानुअघि विमानस्थलमा अवतरण भएपछि उनीहरुको स्वास्थ्य अवस्था जाँच गरिएको थियो।
आवेदन दिएका एक सय ८५ मध्ये ६ जनाको स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि उनीहरु चीनमै रोकिएका छन् भने चार जनाले नेपाल फर्कन अस्वीकार गरेका चीनमा रहेको नेपाली दूतावासले जनाएको छ ।